Dr Sasa မွ ပန္ၾကားခ်က္ … – Real News
Dr. Sasa မှ ပန်ကြားချက် …
ချစ်ခင်ရပါသော ပြည်သူလူထု၊ ပြည်သူ့ သူရဲကောင်းများ၊ ပြည်သူ့ ရဲဘော်များနှင့် ၊ မြန်မာပြည်သူများ၊ ( မြန်မာ ) အကျွန်ုပ်၏ အံသြဖွယ် ကောင်းသောလူများနှင့် လှပသော တိုင်းပြည်အတွက်၊ အတတ်နိူင်ဆုံး လုပ်ဆောင်နေကြောင်း အကျွန်ုပ်အား၊ အားလုံးကို သိစေချင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်သည် အံသြဖွယ်ကောင်းသော လူများနှင့် လှပသော တိုင်းပြည်အတွက် အတတ်နိူင်ဆုံး လုပ်ဆောင်နေကြောင်း၊ အကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်တော့မှ လက်နက်ချတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ( တစ်ကမ္ဘာလုံး ) အားလုံးရဲ့ ရွေးချယ်မူ့က ကျွန်ုပ်ဘက်မှာ ရှိပါသည်။
အကျွန်ှပ်၏ လူမျိုးတိုင်း နှင့် တိုင်းပြည်ကို ဘုရားသခင် ကောင်းကြီးပေးပါစေ။
Dear People’s Compatriots , People’s Heroes, People’s Comrades & the great People of Myanmar (Burma), I just want you all to know that I have been doing everything I can for our wonderful people and beautiful country,
I will always stand for you till the end, we will never surrender, we will never give up. All options are on our side. May God Bless our people and country.
Dr. Sasa .
Dear People’s Compatriots , People’s Heroes, People’s Comrades & the great People of Myanmar (Burma), I just want you all to know that I have been doing everything I can for our wonderful people and beautiful country, I will always stand for you till the end, we will never surrender, we will never give up. All options are on our side. May God Bless our people and country.
ဒေါက်တာ ဆာဆာကတော့ သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပြီ
ဘယ်သူအကူအညီမှ မပါဘဲ သူလုပ်နိုင်တယ် သူမှာ နည်းလမ်းတွေရှိတယ်လို့ အခိုင်အမာ ပြောပါတယ်။
စစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးတဲ့ နိုင်ငံ
နိုင်ငံတကာက မြန်မာသံရုံးများလည်းသူနဲ့ ပြည်သူနဲ့ ပူးပေါင်းပါ ပြည်တွင်းက CDM မပါဝင်သေးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်း CDMလုပ်ပြီး ပါဝင်ပေးဖို့ ပြောပါတယ်။ CDMလုပ်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေဟာ သူရဲကောင်းတွေ ဖြစ်ကြောင်း ဂုဏ်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်း
စစ်တပ်ထဲက စစ်သား‌တွေလည်း စဉ်းစားစေချင်ကြောင်းမဟုတ်ရင် အကုန်ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်ကြောင်း ထည့်ပြောပါသေးတယ်။
တွေ့သင့် တွေ့ထိုက်သူတွေနဲ့ တွေ့ပြီး ပြောသင့်တာတွေလည်း ပြောပြီးပြီ ဆိုပါတယ်။
လာမယ့် သောကြာနေ့ UN တံခါးပိတ်အစည်းအဝေးပွဲDr. Sar Sar တက်ရောက်ခွင့်ရပါမယ်။
ကျွန်တော်တို့ အားမလျော့ပါနဲ့ ဆန္ဒပြမှုတွေ ဆက်လုပ်ထားပါ
ရဲတေယာက္ ခပ္ႏြမ္းႏြမ္း ဝတ္စုံနဲ႔ လက္ထဲ 500 တန္ေလးကိုင္ပီး ေရႊရင္ေအး လာဝယ္ေသာ အခါ